तेह्रथुम पावरको आइपीओमा लगानीकर्ताको आकर्षण, पहिलो दिन कति पर्यो आवेदन ? - Arthatantra.com
तेह्रथुम पावरको आइपीओमा लगानीकर्ताको आकर्षण, पहिलो दिन कति पर्यो आवेदन ?
काठमाडौं । तेह्रथुम पावर कम्पनीको आइपीओमा लगानीकर्ताको आकर्षमा परेको छ । कम्पनीको आइपीओमा पहिलो दिन नै ५ लाख ४६ हजार ३६८ जना आवेदकले ७४ करोड ३९ लाख ४२ हजार रुपैयाँको ७४ लाख ३९ हजार ४२० कित्ताको लागि आवेदन परेको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि ७ लाख ४४ हजार कित्ता आइपीओ निष्काशन गर्न लागेको हो । ८ लाख कित्ता सेयर निष्काशन गरेको भएपनि ४० हजार कित्ता म्युचुअल फन्ड र १६ हजार कित्ता सेयर कम्पनीका कर्मचारीलाई छुट्याईएको छ ।
आइपीओमा भदौ १३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ । उक्त अवधिमा माग अनुसार आवेदन नपरेको खण्डमा भदौ २३ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ ।
कम्पनीको आइपीओमा प्रति कित्ता १०० रुपैयाँका दरले न्यूनतम १० देखि अधिकतम ६० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने छ । यसको बिक्री प्रबन्धकमा एनआइबीएल एस क्यापिटल रहेको छ । ल गानीकर्ताले सि–आस्वा सदस्य रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरबाट आवेदन दिन पाउने छन् ।
वि.सं.२०७८ भदौ ९ बुधवार १६:५९ मा प्रकाशित
अघिल्लाे बैंकमा कर्जाको माग ह्वात्तै बढ्यो, निक्षेप संकलन घट्यो
पछिल्लाे पहुँचयोग्य पर्यटन बजार विस्तार गर्न छैन लगानी, अर्थतन्त्र उकास्न अपाङ्गमैत्री प्रवर्द्धन आवश्यक : अध्ययन
साहस उर्जाको आइपीओमा लगानीकर्ताको ओइरो, अहिलेसम्म कतिले दिए आवेदन ?
वि.सं.२०७८ असोज ८ शुक्रवार १४:४१
काठमाडौं । साहस उर्जाको साधारण सेयर (आइपीओ) मा लगानीकर्ताको ओइरो...